Soosaarayaasha & Shirkadaha Nooca Qalinka - Warshadda Qalinka Shiinaha
Meter-ka Kaarboon Dioxide-ka La Kala Diiday / CO2 Tijaabiye-CO230
Kaarboon laba ogsaydhka la baabi'iyey (CO2) waa cabiro muhiim ah oo caan ku ah bioprocesses taas oo ay ugu wacan tahay saamaynta weyn ee ay ku leedahay dheef-shiid kiimikaadka unugyada iyo astaamaha tayada wax soo saarka. Nidaamyada ku shaqeeya heerarka yar-yar waxay la kulmaan caqabado badan oo ay ugu wacan tahay xulashooyinka xaddidan ee dareemayaasha qaabdhismeedka ah ee kormeerka iyo xakamaynta internetka. Dareemayaasha dhaqameed waa kuwo waaweyn, qaali ah, oo duulaan ku ah dabeecadda mana ku habboon yihiin nidaamyo miisaan yar yar. Daraasaddan, waxaan ku soo bandhigeynaa hirgelinta sheeko, farsamo salka ku haysa cabbirka berrinka ee CO2 ee bioprocesses. Gaaska ku jira baaritaanka ayaa markaa loo oggolaaday inuu dib u xisaabiyo iyada oo loo marayo tuubbooyin gaas-ka ah oo aan la dabooli karin illaa mitirka CO230.
CON30 waa qiime jaban, ECM / TDS / Salinity meter oo lagu kalsoonaan karo taasoo ku habboon tijaabinta codsiyada sida hydroponics & gardening, barkadaha & isbaasyada, aquariums & reef taangiyada, ionalayaasha biyaha, biyaha la cabbo iyo waxyaabo kale oo badan.
Kala firdhay Hydrogen Meter-DH30
DH30 waxaa loogu talagalay iyada oo ku saleysan habka ASTM Standard Test. Shuruudda ayaa ah in lagu cabbiro isku-uruurinta hawo-mareenka kala daadsan hal jawi biyo nadiif ah oo milix leh. Habka ayaa ah in loogu beddelo suurtagalnimada xalka xaddiga hawo-mareenka kala daadsan ee 25 darajo Celsius. Qiyaasta kore ee cabirka waa qiyaastii 1.6 ppm. Habkani waa habka ugu habboon uguna dhakhsaha badan, laakiin way fududahay in lagu farageliyo walxaha kale ee yaraya ee xalka ku jira.
Codsi: Cabirka saafiga ah ee biyo-nadiifinta hawo-biyoodka.
Mashiinka Oxygen ee la kala diray / Do Meter-DO30
DO30 Meter sidoo kale waxaa loogu magac daray Mashiinka Oxygen ee la kala diray ama Oxygen Tester oo la kala diray, waa aaladda cabir ka dhigeysa qiimaha oksijiinka kala daadsan ee dareeraha ah, kaas oo si weyn loogu isticmaalay codsiyada baaritaanka tayada biyaha. Mitirka la qaadan karo ee la qaadan karo ayaa tijaabin kara oksijiinta ku milma biyaha, taas oo loo isticmaalo dhinacyo badan sida biyo dhaqashada, daaweynta biyaha, la socodka deegaanka, sharciyeynta wabiga iyo wixii la mid ah. Sax ah oo deggan, dhaqaale iyo ku habboon, fududahay in la ilaaliyo, DO30 oksijiin milmay ayaa kuu keenaya sahlanaan badan, abuur khibrad cusub oo ku saabsan dalabka oksijiinta kala diri.
Dariiqa kacaan ee isla markiiba lagu kala diro qiimaha ozone iyada oo la adeegsanayo habka cabbirka saddexda koronto: si dhakhso leh oo sax ah, oo u dhigma natiijooyinka DPD, iyadoon wax reagent cunin. DOZ30 jeebkaagu waa lammaane caqli-gal ah oo kula cabbiraya ozone milmay adiga.
Meter Koloriin Bilaash ah / Tijaabiyaha-FCL30
Codsiga habka saddexda koronto wuxuu kuu oggolaanayaa inaad si dhakhso leh oo sax ah u hesho natiijooyinka cabbirka adigoon cunin wax reagent midab leh. FCL30 jeebkaagu waa lammaane caqli badan oo adiga kula cabbiraya ozone milmay.
Ammonia (NH3) Tijaabiyaha / Meter-NH330
Mitirka NH330 sidoo kale waxaa loogu yeeraa ammonia nitrogen meter, waa aaladda cabiraysa qiimaha ammonia ee dareeraha, kaas oo si weyn loogu isticmaalay codsiyada baaritaanka tayada biyaha. Mashiinka la qaadan karo ee 'NH330 mitir' wuxuu ku tijaabin karaa ammonia biyaha, taas oo loo adeegsado dhinacyo badan sida biyo dhaqashada, daaweynta biyaha, la socodka deegaanka, sharciyeynta wabiga iyo wixii la mid ah. Sax ah oo deggan, dhaqaale iyo ku habboon, fudud oo la ilaaliyo, NH330 ayaa kuu sahlaysa adiga, abuur khibrad cusub oo ku saabsan codsiga ammonia nitrogen.
(NO2-) Digital Nitrite Meter-NO230
NO230 mitir ayaa sidoo kale loogu yeedhay mitirka mitirka, waa aaladda cabirta qiimaha nitrite ee dareeraha ah, kaas oo si weyn loogu isticmaalay codsiyada baaritaanka tayada biyaha. Mashiinka la qaadan karo ee NO230 mitir ayaa tijaabin kara nitrite-ka biyaha ku jira, kaas oo loo isticmaalo dhinacyo badan sida biyo dhaqashada, daaweynta biyaha, la socodka deegaanka, sharciyeynta wabiyada iyo wixii la mid ah. Sax ah oo deggan, dhaqaale iyo ku habboon, fudud oo la ilaaliyo, NO230 ayaa kuu sahlaysa adiga, abuur khibrad cusub oo ku saabsan codsiga nitrite.
Digital ORP Meter / Oxidation Dhimista Meter-ORP30 Dijital ah
Badeecad si gaar ah loogu talagalay in lagu tijaabiyo kartida aan caadiga ahayn ee aad si fudud ugu tijaabin karto oo aad ku raadin karto qiimaha millivolt ee shayga la tijaabiyay. Mitirka ORP30 sidoo kale waxaa loogu yeeray mitir macquul ah, waa aaladda cabiraysa qiimaha redoxka dareeraha, kaas oo si weyn loogu isticmaalay codsiyada baaritaanka tayada biyaha. Mitirka la qaadan karo ee ORP ayaa tijaabin kara awooda biyaha, taas oo loo isticmaalo dhinacyo badan sida biyo dhaqashada, daaweynta biyaha, la socodka deegaanka, sharciyeynta wabiyada iyo wixii la mid ah. Sax ah oo xasilloon, dhaqaale ahaan iyo ku habboon, fududahay in la ilaaliyo, ORP30 redox iman kara ayaa kuu sahlaysa wax badan, abuur khibrad cusub oo ku saabsan dalab macquul ah.
Badeecad si gaar ah loogu talagalay in lagu baaro qiimaha pH kaas oo aad si fudud ugu tijaabin karto oo aad ku raadjoogi karto asiidhka-salka shayga la tijaabiyey. mitirka pH30 sidoo kale waxaa loogu yeeraa asiidomore, waa aaladda cabiraysa qiimaha pH dareeraha, kaas oo si weyn loogu isticmaalay codsiyada baaritaanka tayada biyaha. Mitirka pH ee la qaadan karo wuxuu tijaabin karaa asiidh-ku-jirka biyaha, kaas oo loo adeegsado dhinacyo badan sida biyo dhaqashada, daaweynta biyaha, la socodka deegaanka, sharciyeynta wabiga iyo wixii la mid ah. Sax ah oo deggan, dhaqaale iyo ku habboon, fudud in la ilaaliyo, pH30 ayaa kuu sahlaysa adiga, abuur khibrad cusub oo ku saabsan dalabka acid-base.
Quadrupole Shaxanka Samaynta Iskuduwaha Sawirka, Sensor-ka Electromagnetic, Feeraha Dareeraha Fududeeyaha, Dareeraha Dareemida Isukeenista Daawaha Titanium, Chlorophyll Sensor, Waxqabadka TDS Sensor,